popov Archives - Velizar Popov popov Archives - Velizar Popov
Interview for Myanmar media
Posted on 23.11.2020 23.11.2020 by velizarp
🇲🇲မြန်မာယူ ၂၃ အသင်း မန်နေဂျာ 🇧🇬Velizar Popov နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
FFM-မင်္ဂလာပါ နည်းပြကြီး ကျွန်တော်တို့ မြန်မာဘောလုံးပရိသတ်တွေကတော့ နည်းပြကြီးရဲ့ အသင်းအုပ်ချုပ်ပုံ၊ စိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ ပြုမူလှုပ်ရှားပုံတွေကို သဘောကျကြတယ်ပေါ့။ ဒီအပေါ်မှာရော နည်းပြကြီးအနေနဲ့ ဘယ်လို ထင်မြင်မိပါသလဲ။
VP-အခုလို ကျွန်တော်ရဲ့ မြန်မာဘောလုံးအပေါ်အားထုတ်မှုတွေ မြန်မာယူ၂၃ အသင်းအောင်မြင်စေဖို့ ကြိုးစားမှုတွေကို မြန်မာပရိသတ်တွေဘက်က နှစ်သက်တယ်ဆိုတာကြားသိရတော့ အတော်လေးပျော်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ် ကျွန်တော့ရဲ့ ပထမဆုံးတာ၀န်ယူရတဲ့ နေ့ကတည်းက ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တာပါ။ လူငယ်ကစားသမားတွေကို နောက်တစ်ဆင့်ကို ရောက်ရှိစေဖို့ အပြင် သူတို့ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊စိတ်ခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အထူးသဖြင့် တစ်ဦးချင်းစွမ်းရည်ပိုင်းတွေအတွက်ပါတိုးတက်စေဖို့ပါ ။လွန်ခဲ့တဲ့၂နှစ်တာကာလကနေ အခုအချိန်အထိ ကျွန်တော့်ကစားသမားတွေအပေါ်မှာ သူတို့ရဲ့အားထုတ်မှုတွေ ကြိုးစားမှုတွေကို တကယ်လည်း နှစ်သက်သဘောကျမိပါတယ်။ နောက်လာမယ့်နှစ်တွေမှာလည်း လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာရော ကစားပွဲမှာပါ နေ့တိုင်းတိုးတက်နေတဲ့ လူငယ်ကစားသမားအသစ်တွေ ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
FFM- လာမယ့်နှစ် 2021 မှာ ဒါမှမဟုတ် ကိုဗစ်ရောဂါပြီးဆုံးသွားတဲ့နောက် မှာ နည်းပြကြီးနဲ့ အသင်းအနေနဲ့ ဘယ်လို ခြေစမ်းပွဲတွေ ပြိုင်ပွဲတွေ ယှဥ်ပြိုင်သွားဖို့ရှိပါသလဲ။
VP- လာမယ့်နှစ်မှာ ကျွန်တော်တို့ယှဥ်ပြိုင်ရမယ့် အဓိကပြိုင်ပွဲကြီး ၃ ပွဲရှိပါတယ်။ ၂၀၂၁ နို၀င်ဘာလမှာ ကစားရမယ့် ဗီယက်နမ်ဆီးဂိမ်းရှိပါမယ်။ စက်တင်ဘာ ဒါမှမဟုတ် အောက်တိုဘာလ မှာ ကစားရမယ့် အာရှယူ ၂၃ ခြေစစ်ပွဲ ပြီးတော့ 2021 နှစ်လည်လောက်မှာ ကျင်းပမယ့် အာဆီယံ ယူ ၂၃ ဘောလုံးပွဲလည်း ရှိနေတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲအတွက်တော့ လူငယ်သွေးသစ်ကစားသမားတွေနဲ့ အသင်းသစ်ကို ဖွဲ့စည်းဖို့ ရှိနေပြီး အဓိကရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ ဆီးဂိမ်းဘောလုံးပွဲမှာ အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်လည်း ပြင်ဆင်မှုပိုရအောင်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့မှာ တော့ ပြင်ဆင်ထားမှုတွေ အဆင့်သင့်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်ဆိုတော့ ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ ခြေစမ်းပွဲတွေ ဘယ်အချိန်မှာ ကစားရမယ်ဆိုတာတော့ ကြိုခန့်မှန်းလို့မရပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့လည်း ပုံမှန်ဘောလုံးလောကကြီးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ပြီး စနိုင်သလောက် မြန်မြန်ပြန်စနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။
FFM- မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ရဲ့ ဘောလုံးကလပ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ မကွေးအသင်း ထွက်ခွာသွားမှုနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ နည်းပြကြီး ဘယ်လိုထင်မြင်မိပါသလဲ။
VP-ဒီသတင်းကို တကယ်ကြားရပြီးကတည်းက ကျွန်တော်လည်း တကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ မကွေးအသင်းဆိုတာ မြန်မာဘောလုံးလောကရဲ့ ၀ါရင့်ကလပ်အသင်းတစ်သင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်ကတည်းက မကွေးအသင်းဆီကနေ ကစားသမားကောင်းတွေ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော့ရဲ့ ယူ ၂၃ အသင်းအတွက်ကော လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက်ပါ ပံ့ပိုးပေးဖို့ ကစားသမားကောင်းတွေ လူငယ်တွေကို အခွင့်အရေးပေးတဲ့အတွက် တကယ်လည်း ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။မနှစ်ကလည်း ဇွဲကပင်အသင်းရော ချင်းယူနိုက်တက်ပါ ဒီလိုမျိုး ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ တကယ်ပဲ စိတ်မကောင်းစရာပါ။ ။ ဒီလိုကလပ်အသင်းတွေကို ကယ်ဆယ်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ ရှာတွေ့နိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်တကယ်ပဲ မျှော်လင့်မိပါတယ်။၊
FFM- ၂၀၁၉ ဆီးဂိမ်းမှ နည်းပြကြီးနဲ့ မြန်မာ ယူ ၂၂ အသင်းကို မြန်မာပရိသတ်တွေက သတိရနေဆဲပါ။ နည်းပြကြီး နဲ့ အသင်းရဲ့ စွမ်းရည်တွေ အသင်းရဲ့ ကစားပုံတွေကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့မြန်မာပရိသတ်တွေက မြန်မာအသင်းကို ချန်ပီယံဖလား ရစေချင်တာပါ။ ဒါမျိုးဖြစ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့လည်း ပိုအလုပ်လုပ်ပြီး ပိုကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဆိုတာ နည်းလည်ပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာကောနည်းပြကြီးရဲ့အမြင်ကိုပြောပြပါဦး။
PV- ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နည်းပြအဖွဲ့၀င်တွေရော ကစားသမားတွေရော ၂၀၁၉ ဆီးဂိမ်းမှာ အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ တတိယကြေးတံဆိပ်ဆုကိုလည်းဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ဗီယက်နမ်နဲ့ အင်ဒိုနီးရှားအသက်းကတော့ ကျွန်တော်တို့အသင်းထက်လည်း တကယ်ကောင်းခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာ ကျွန်တော်တို့အသင်းအနေနဲ့ ၀ါရင့်အသင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ မလေးရှား ထိုင်း အိမ်ရှင်ဖိလစ်ပိုင်အသင်းတွေရဲ့ ရှေ့ရောက်အောင်လည်း ပြုလုပ်ခဲ့နိုင်ပါတယ်။လာမယ့်နှစ် ဆီးဂိမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ ဒီ့ထက်ပိုကစားနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်လည်း ပိုမြင့်မြင့်ထားပါတယ်။ ဆိုတော့ လာမယ့် ၂၀၂၁ ဗီယက်နမ်ဆီးဂိမ်းမှာ ချန်ပီယံဆုကို ရဖို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပြီး ရယူပေးသွားမယ်လို့ မြန်မာပရိသတ်တွေကို အသေအချာပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ့်တိုင်ကလည်း တခြားသူတွေထက် မြန်မာအသင်းကို ချန်ပီယံ ပိုဖြစ်စေချင်ပါယ်။ ဘယ်ပြိုင်ပွဲမဆို အနိုင်ရစေချင်ပါတယ်။ နောက်နှစ်မှာ မြန်မာဘောလုံးအသင်း အောင်မြင်မှု ပိုမိုကြီးကြီးမားမားရဖို့ ကျွန်တော်ဒီထက်မက ပိုကြိုးစားပါတော့မယ်။ မြန်မာပြည်မှာ တကယ်စွမ်းရည်ပြည့်၀တဲ့ ကစားသမားကောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဘယ်ပွဲမှာမဆို ရှာဖွေလေလေ ကစားသမားကောင်းတွေ တော်တော်များများ တွေ့ရလို့ တကယ်ပျော်ရပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဒီခေတ်မှာ ဒီအသက်အရွယ်နဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေ မှာ အနိုင်ရဖို့ထက် ပိုအရေးကြီးတာရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါက ဘာလဲဆိုတော့ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်းအတွက် ကစားသမားကောင်းတွေ ဖန်တီး​ွေးထုတ်နိုင်ဖို့ပါ။ ကစားသမားတွေကို သူတို့ လက်ရှိအခြေအနေထက်ပိုကောင်းအောင် ပံ့ပိုးပေးဖို့ပါ။
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဂျပန် ကိုရီးယား တရုတ် ထိုင်း ဗီယက်နမ် နဲ့ မလေးရှားတို့လို ပြည်ပလိဂ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ကစားနိုင်စေဖို့ပါ။
FFM- နည်းပြကြီးရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံး ဘောလုံးပွဲများ သိလို့ရနိုင်မလား။
VP-ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ပွဲကောင်းတွေကစားခဲ့ကြတော့ အကောင်းဆုံးတစ်ပွဲကို ရွေးဖို့တော့ ခက်ပါတယ်။ AFF ပွဲမှာကစားခဲ့ရတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားလိုအသင်းနဲ့ အာရှခြေစစ်ပွဲမှာကစားခဲ့ရတဲ့ တီမောနဲ့ မကာအိုတို့လိုအသင်းတွေလိုမျိုးပေါ့။ဒါပေမယ့်ပွဲကောင်းတွေကတော့ ဆီးဂိမ်းမတိုင်ခင် ခြေစမ်းကစားခဲ့တဲ့ ဗီယက်နမ်နဲ့ပွဲစဥ်၊ဒီပွဲပြီးတော့ကစာူခဲ့ရတဲ့ မလေး တီမော ကမ္ဘောဒီးယားအသင်းတွေပေါ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နည်းစနစ်ပိုင်းအရ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပွဲကတော့ အိမ်ရင်ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ ပွဲပါ။ ဒီပွဲအနိုင်​ဟာ ကျွန်တော်တို့အသင်းကို ထိပ်ဆုံးသုံးသင်းထဲရောက်စေတဲ့၀င်ပေါက်တစ်ခုပါပဲ။ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ပွဲဟာ ခက်ခက်ခဲခဲအနိုင်ရရုံတင်မကပါဘူး။ အိမ်ရှင်အသင်းကိုပါ အနိုင်ကစားနိုင်လိုက်တာပါ။ပထမပိုင်းမှာ ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုအသာနဲ့ ပုံစံကောင်းတစ်ခုပြသနိုင်ခဲ့တယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရင် နေရာလွတ်တွေရှာဖွေနိုင်ခဲ့တယ်။ပွဲချိန်အတွင်းမှာ မတူညီတဲ့ နည်းစနစ်ချဥ်းကပ်မှုတွေနဲ့ သေသပ်တဲ့ဂိုးဖန်တီးမှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အထပ်ထပ် လေ့ကျင့်မှုတွေရဲ့ပေါင်းစပ်မှုကတဆင့် အကောင်းဆုံး ဂိုး ၂ဂိုးကိုလည်းသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် ပွဲကောင်းကောင်းတွေကိုင်တွယ်ခဲ့ရ ကစားခဲ့ရပေမယ့် ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ပွဲကတော့ ကျွန်တော့အတွက်နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြိုက်ဆုံးပွဲပါပဲ။ ကျေးဇူးပါပဲ။
Posted in blog, Interview, Posts, Recent postsTagged Interview, popov, velizar
Eric Abrams Reference Letter / Recommendation
Posted on 28.05.2020 02.06.2020 by velizarp
MFF Myanmar Football Federation Eric Abrams ex-Technical Director
Mr. Velizar Popov, since January 2019 appointed as the MFF U23 National Team Coach at Myanmar Football Federation and now preparing the new generation U23s for the Sea Games 2021 afteravery successful Sea Games 2019 in the Philippines rewarded withabronze medal behind finalists Vietnam and Indonesia.
When I internationally advertised the job vacancy at MFF, Mr. Velizar Popov was amongsta100 of candidates the one, who impressed in his overall knowledge of international football and the latest tendencies. He showedavery professional way of approaching players asacoach. Having experienced in Asia different professional environments, he understands well how cultures can have impact on player and team performances and what’s the best way to lead them. His football approach is ingrained byavery positive playing philosophy, wherein possession of the ball is critical to playagood brand of football and to be successful.
Further I experienced that his way of acting is meticulous and consistent, which impacted the U23 Myanmar National Team performances very positively and guaranteed progress in every game. Important underlying factors for his achievements are his good eye for potential talented players, his game-analysis and his quality to transfer to effective practical sessions, which made the players easy to understand the objectives and applying the playing principles. Finally on the basis of the success wasaclear strategy plan, taking in account all factors and good corporation with his coaching staff. Aiming the highest professional approach, he understood in the same time the limits of the MFF and always managed this inapositive way. I appreciated Velizar’s open and also positive critical mindset, which was always looking for improvement asacoach, and looking further than only the result.
I can profoundly recommend Mr. Velizar Popov asaprofessional coach for professional Senior Club Teams, Senior and U23 National Teams.
Charyl Chappuis-Velizar Popov is the best coach I have worked with in Thailand Premier League
Posted in blog, Posts, Recent postsTagged bulgaria, coach, football, letter, popov, recommendation, reference, soccer, velizar